Yeyiphi iTekhnoloji eye yapheliswa nee-Smartphones? | Martech Zone
Yeyiphi iTekhnoloji eye yapheliswa nee-Smartphones?
NgoLwesithathu, Meyi 3, 2017 NgoLwesithathu, Meyi 3, 2017 Douglas Karr
Siza ngomhla we-10 wokuzalwa kwe-iPhone, esungulwe nge-29 kaJuni, 2007.
Njengayo nayiphi na i-psychopath ekholisayo, ii-smartphones ziyakwazi ukubeka ngaphambili. Banobuhlobo, baluncedo kwaye babonakala ngathi ngekhe benzakalise impukane. Ngalo lonke elixesha bangababulali abanolwazelelelo abaphazamisa iiwotshi xa belele kwaye baqiniseke ukuba inkqubo yakho ye-GPS ayifumaneki kwakhona. UJames Pelton
Kufanelekile kuphela ukuba iZilumkiso zeZicatshulwa eziSelfowni zisungule oku Umbulali imbonakalo-mfanekiso: Iselfowuni esiSibulali esiBulalayo-Izixhobo zeGajethi zibulawa zii-Smartphones ukubhiyozela ukuphela kweetekhnoloji ezininzi ezibonelelwe ngeqonga elimangalisayo entendeni yezandla zethu. Nazi iitekhnoloji ze-10 eziye zabulawa ngenxa yeselfowuni zethu ezimangalisayo
Iwoshi ye-alamu -I-61% yabasebenzisi be-smartphone bathi ifowuni yabo ithathe indawo yewotshi yabo yealam.
Watch Ukuthunyelwa kweSmartwatch kuphele ukuthunyelwa kweSwitzerland okokuqala kwikota ye-4 ka-2015.
Abathrekhi bokuPhepha -I-58% yabasebenzisi be-smartphone bakhuphele ubuncinci usetyenziso lwempilo.
MP3 Abadlali -Izicwangciso zedatha ezingabizi kunye neenkonzo zokusasaza kwii-smartphones zithathe indawo.
Khomba kwaye Shoot Camera -Ii-smartphones zenze ngaphezulu kwe-50% yemifanekiso ekwabelwana ngayo ukusukela nge2011, ngaxeshanye ukuhla okukhulu kwintengiso yekhamera yeelensi ezinzileyo.
Ikhamera -Kunye neekhamera, ukuthengisa kwe-camcorder kuyaqhubeka nokuntywila.
IGPS kunye neeMaphu Ingeniso yeTomTom yehle nge-2 / 3rds kwiminyaka emi-2, kwaye iimephu zikaGoogle ngoku zinabasebenzisi abayizigidi ezi-1 (nangona ndingakhetha Zima).
Iifowuni zasekhaya -I-41% yamakhaya ayisenayo ifowuni yomnxeba kwaye kusele kuphela iifowuni zokuhlawula eziyi-100 eHong Kong.
Amaphephandaba -Iifowuni eziphathwayo zithathe indawo yamaphephandaba njengezinto zokufunda ezenzelwe amadoda kwindlu yangasese.
Amakhwenkwe omdlalo Ingeniso yemidlalo ephathekayo zihlandlo ezi-3 zokuzinikezela ngesandla.
iithotshi -I-app yabasebenzisi be-smartphone abayithandayo!
Incwadi yedilesi -Kubulawa ziincwadi zonxibelelwano ezingqamanisa nabafowunelwa bethu kunye nazo zonke iinkonzo zethu ezikwi-Intanethi.
Abadlali beVidiyo yobuqu -Kunye nomculo, i-smartphone ngoku ngumabonwakude ophathwayo. Kwaye iinkampani zentambo ziyaphendula, ngeenkonzo zokusasaza.
Ukurekhodwa kwelizwi - Uyakhumbula ukubizela? Nam futhi.
Calculator -Uyazi ukuba uyisebenzisile ukubala incam okanye ezimbini.
Inkcazelo - Bhala izikhumbuzo kunye namanqaku.
Photo Album -Uke wawubona umfanekiso wenja yam, uGambino? Mhlawumbi ndine-100 yazo kwi-iPhone yam.
yemozulu - Akukho sidingo sokuvula iindaba, iTshaneli yeMozulu iyafumaneka entendeni yesandla sethu.
Iifowuni Ezisisidenge - Awusosidenge ukuba usebenzisa iflip yefowuni, ndiyakuthembisa… kodwa awusebenzi.
Kaninzi -Sinokufumanisa kwixa elizayo ukuba i-electromagnetic radiation (EMR) ekhutshwe ziimasti zeselfowuni zibangela imiba eyongezelelweyo kwindalo esingqongileyo… hlala ubukele.
tags: incwadi yedilesiiwoshi ye-alamuCalculatorcamcorderikhamera +ukubizaIifowuni ezingenangqondoimitha yombaneEmrumkhondo wezohamboizibaneamakhwenkwe omdlaloGPSUmdlalo ophathwayoifowuni yasekhayalandlineimephuiimephuumdlali we-mp3Umdlali womculoPhe phandabai mpopashoHlawula ifowuniabadlali bevidiyoifoto ye-albhamukhomba kwaye udubuleurekhoda ilizwiukubukelayemozulu